Shirkada 3 oo shaqaalaha u ogolaan doonta in ay Ciida ku badashaan Kirismaska | Somaliska
Shirkada isgaarsiinta ee 3 ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ka bilaabata afarta bisha September in dhamaan shaqaalaha shirkada fursad loo siin doono in ay maalmaha casaanka ay ku badashaan maalmaha kale.
Tusaale, ayaa shirkada waxay shaqaalaha Muslimiinta ah fursad u siin doontaa in maalinta Eid-Al-Fitr ay ku badashaan maalinta Kirismaska. Taasoo, micnaheeda yahay in ay fasax yihiin maalinta Ciida balse ay shaqayn doonaan maalinta Kirismaska.
Shirkada 3 ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee fursadaan siisa shaqaalaheeda. Agaasimaha shirkada Nicholas Högberg ayaa sheegay in ay isbadaladaan u sameeyeen si ay uga farxiyaan shaqaalahooda.
Shaqaalaha ayaa loo ogolaan doonaa in 5 maalmood oo casaan ah ay ku badashaan shan maalmood oo caadi ah, maadaama shirkada 3 ay ka shaqeeyaan dad ka soo jeeda wadamo kala duwan iyo diimo kala duwan ayay arintaan tahay mid soo dhaweyn mudan.
Horay ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha Muslimiinta ay fikrado la mid ah midaan u soo jeediyeen shirkadaha iyo kamuunada Sweden balse aysan cidna dhagaysan.